Ozi ndụ na-azọpụta ndụ maka ndụ gị ugbu a: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ IHE SIM	by Martin Vrijland	na 22 July 2019	• 19 Comments
Oge eruola ịhapụ ụwa nrọ ma malite ile anya gburugburu ụwa maka ihe ọ bara uru. Nke ahụ ga-eweta mgbanwe dị mkpa ná ndụ gị. Ya mere, m ga-achọ ịdọrọ uche gị gaa n'ihu n'ihu Richard Thieme (nke dị n'okpuru ala a), onye bụbu onye nchụàjà nke gbanwere onwe ya dị ka onye na-enwe mmetụta, ndị ụlọ ọrụ dịka Arthur Andersen, Allstate Insurance, General Electric, National Security Agency (NSA) ), Microsoft, na Ngalaba Nke United States nke Treasury. Ihe ngosi a na-ekwu ihe niile ị chọrọ ịma iji ghọta ụwa taa.
Ọ bụrụ na ị ederede m gụọ banyere mmadụ na - adịghị ndụ (na ndị avatar nke onye wuru ihe ngosi a chụpụrụ), mgbe ahụ ị ga-aghọta na ndị ama ama dịka Richard Thieme so na ndị ikpeazụ. Onye na - agụ akwụkwọ ọhụrụ nwere ike chọọ iwepu okwu ikpe ikpeazụ ahụ, mana m na - akwado gị ka ị mụọ ihe a na - ekwu ebe a na ihe kpatara ọtụtụ ìgwè na ndị ọkà mmụta sayensị na - ekwu ugbu a na anyị bi na ịme anwansị. Nke ahụ abụghị n'efu, ọ bara uru ịtụle. M na-ekwu na ọ bụ dị mkpa iji ghọta ihe merenụ taa; ịmara ebe a na-ezite ya ma chọpụta ihe a ka nwere ike ime banyere ụgbọ ala ụgbọ mmiri na-atụgharị uche na nke aghụghọ nke a pụrụ ịhụ na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ma ọ bụ kwa:
Site na ịtụle isiokwu a, ị ga - achọpụta ihe bụ isi nsogbu niile dị n’ụwa ma hụkwa azịza ya.
Ahịrịokwu mmeghe nke Richard Thieme n'oge ogbako Def Con hackers site na 2015 (lee vidiyo dị n'okpuru ebe a) kwesịrị ka nyochaa nke ọma. Biko rịba ama: ihe ngosi a malitere afọ anọ, yabụ ọnọdụ dị na ngalaba nke mmepe teknụzụ, nke Thieme kọwara, bụzi ihe oge gaferela ma ọ bụrụ na anyị eburu iwu Moore n'uche. Agbanyeghị, dị ka ụfọdụ si kwuo, iwu Moorish agaghịzị abaghị uru ọ bụrụ na ọ bụrụ na njedebe njedebe mbelata n'ọtụtụ cha cha (ngbanwe mkpokọ ngbanwe nke transistor nke tọrọ ntọala maka iwu Moore) iji mepụta ụzọ maka mmepe na mpaghara nke netwọkụ akwara (nke na-eme ka iwu Moore yie ka ọ bara uru ọzọ).
Ngwunye netwọk na-anwa idepụta ọrụ nke ụbụrụ anyị. Anyị na-azụ uche anyị site na ịmụ nwa na ndị nkụzi anyị na-agwa anyị mgbe anyị hụrụ cat ma ọ bụ ihe okwu ọ bụla pụtara. Anyị mmadụ na-amụta site na 'data set' na ndị mụrụ anyị na ndị nkuzi na-akụziri anyị. Ngwunye netwọk na-amụta site na data set na ọ na-enweta. Nhazi data ahụ ga-elekọta nke onye nlekọta ịzụ ya. John Hennessy, ọkà mmụta sayensị kọmputa American, academician, ọchụnta ego na onyeisi oche nke Alphabet Inc. (Google), na-akọwa ihe ngosi a ihe dị mkpa na usoro nke AI na netwọk na-adịghị.
Ihe ị nwere ike ịmụta site na nkwupụta ahụ bụ otú ihe data dị mkpa dị. ọ bụrụ na ị na-eme ka nke ahụ mara ihe kachasị ndị mmadụ ugbu a, ya bụ Snapchat, Instagram na ụdị mgbasa ozi ọhaneze ndị ọzọ na-emepụta ihe data, mgbe ahụ i nwere ike icheta ihe ụwa dị ka otu ' gbanwere. Mụ na gị na-enye data data na AI na-eji na-azụ.
Ihe ngosi nke Hennessy bụ oge ochie, ebe ọ bụ na Facebook amalitelarị ịmepụta AI nke nwere ike ịrụ ọrụ na PC dị mfe karịa kọmputa super mega na Google Alphabet nke mụtara ihe egwuregwu kachasị mgbagwoju anya Gaa na oge na site na onye kacha mma n'ụwa. Facebook mepụtara usoro AI (nke a na-akpọ Pluribus) na-ejikwa ike 6 na-egwu ọtụtụ egwuregwu poker ugboro ugboro. Nke a na-achọpụta ọtụtụ egwuregwu site na nrite mmeri. Egwuregwu dị ka Go bụ ihe dị mfe maka AI, n'agbanyeghị na enwere ike ijikọta ọnụ ụlọ karịa na ọnụọgụ dị n'ime ụwa (n'ihi na ozi niile dị ma ọ dịkarịa ala ịhụ). Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka AI ịzụ. Nke a dị iche iche maka poker, n'ihi na ị na-eme ihe na-adịghị mma nke ọtụtụ egwuregwu. Ya mere, Facebook kwadoro ịmepụta nkwupụta a:
Anyị bụ 2019 na mmepe na teknụzụ na-aga n'efu. NVIDIA, onye na-emepụta kaadị eserese maka ụlọ ọrụ egwuregwu (ugbu a buru nnukwu ibu karịa ụlọ ọrụ ihe nkiri) ewuworị netwọkụ akwara ozi na-eme ka ọ dị obere ụmụaka. deepfakes imepụta ma kenye gburugburu ebe miri emi. N'ihi ya, ị ga-enwe ike ịnagide ihe ndị ahụ, ị ​​ga-eche.
Ọ bụrụ Richard Thieme na-ekwu okwu na ngosipụta dị n'okpuru banyere teknụzụ nke amaara n'oge ahụ, ị ​​ga - eji anya nke uche gị hụ ebe anyị nọ ugbu a. Ọtụtụ ndị ka chere na anyị na-ekwu maka SciFi ma zoo aka na fim ma ọ bụ usoro Black Mirror na Netflix. Oge eruola ka ị chọpụta na ihe ndị ahụ niile ị chere na akụkọ ifo sayensị bụworị eziokwu.
Mmetụta nke echiche
In isiokwu a M na-ezo aka na Elon Musk nke ụlọ ọrụ ya Neuralink, nke na-ewuli ụbụrụ kọmputa-maka ikuku njikọ na ịntanetị na ngwa iji rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị lelee nkwupụta Thieme n'okpuru ebe a, ị ga-achọpụta na ọnọdụ nkà na ụzụ dị na 2015 dị ọtụtụ. Na DARPA, ha enweela ike ịchịkwa ụbụrụ mmadụ n'enweghị ihe mgbochi. Otu n'ime ebe ndị a na-eme nchọpụta bụ ịmeghachi ihe ncheta, iwepụ ebubo mmetụta uche site na ncheta, iwepụ ihe ncheta ụfọdụ, mgbanwe nke ọdịnaya nke ihe ncheta na ntinye nke ncheta ọhụrụ. Onye ọzọ na-agba mbọ na-agụ uche ahụ ma wepụ ihe ọmụma. Onye ọzọ na - enyocha iji DNA iji ghọta ma gbanwee ụdị echiche, mmetụta na omume. Ihe omuma ndi ozo n'ile ihe anya, onyonyo anya (site na anya na onu nke onye ozo), tinyere ihe ndi ozo na uzo ndi na-adighi na-acho mmadu nke na-ejide ike ike nke uzu iji mee ka psychokinesis, clairvoyance and telepathy.
Ị nwere ike ichetụ n'echiche 'nnukwu ụlọ ọrụ' nke Elon Musk's Neuralink ga-enwe ma ọ bụrụ na ọtụtụ nde mmadụ na-ekpebi ịtụkwasị obi ha n'igwe ojii? Ị nwere ike ichetụ n'echiche ọnọdụ anyị nọrọlarịrị mgbe usoro ndị a na-emeghị ihe ga-ejide ụbụrụ (nke dị adị na Richard Thieme) jikọtara ya na netwọk 5G?
Richard Thieme na-egosikwa ọnọdụ ihe gbasara usoro ndu nke ahụ mmadụ na usoro ndu nke ihe niile dị ndụ. Ka m na-akọwa ebe a na ebe nrụọrụ weebụ ruo ọtụtụ afọ, usoro ihe ọmụmụ anyị aghọwo ihe atụ na ihe nchekwa data. AI, nchịkọta data buru ibu (ihe ntanetị nke netwọk na-emeputa) site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ihe ndị dị na nzụlite nke nkà na ụzụ nano ya na ihe omimi nke ihe omimi na umu mmadu, na-eme ka o kwe omume akụkụ na aka. Thieme na-ekwusi ike na ihe anyị na-ahụ na akwụkwọ sayensị dịkarịa ala afọ ise n'azụ ụlọ ọrụ ndị dị ka DARPA ka arụpụtalarị. E nwere ike ịmegharị mkpụrụ isi nri ọtụtụ iri afọ gara aga. Ka ọ dị ugbu a, a na - etolite mkpụrụ ndụ ụbụrụ na ụlọ nyocha na ntanetị anụ ọhịa nke oke ndụ na oke enwe.
Nyere na ụbụrụ mmadụ nwere igwe elekere 80, ụlọ ọrụ kachasị mma nke nwere ike ịnweta maka ụlọ ọrụ ndị isi, ndị ọchịchị na ụlọ ọrụ ha (dịka DARPA), bụ ụbụrụ mmadụ.
Ọdịdị mmadụ-avatar mmadụ na usoro AI nke na-achịkwa ụbụrụ
Ka anyi laghachi na nmalite na anyi bi n'ime nko (ebe ị kwuru na ị nweghị ike ịbanye "na" na nyocha, ma na ọtụtụ na-enweta nchịkọta zuru ezu na ngwegharị ahụ, dị ka egwuregwu egwuregwu egwu kpamkpam kpam kpam na egwuregwu ahụ), ahụ mmadụ bụ ihe ọ bụla karịrị avatar na egwuregwu ahụ, ụbụrụ mmadụ bụ onye na-arụ ọrụ ndụ nke avatar ahụ, nke usoro mmụta ntanetị na-azụlite na AI. Na isiokwu a Akọwara m nke a n'ụzọ zuru ezu.
O di oke nkpa ka i choputa isi ihe di n'elu. Ị ga-ahụ na ị bụghị onye ị hụrụ mgbe ị na-ele anya na enyo. Ị na-ele anya na ndụ gị-avatar (mmadụ a kpara na eziokwu a), mana onye na-ekiri ihe na-abụghị onye na-ekiri ya (dịka onye ọkpụkpọ Playstation na-anọdụ ala n'ihe ndina ya na onye njikwa n'aka ya).
Ka anyị lee anya na ya okpukpu abụọ nnwale nnwale site na physicist Niels Bohr, ọ na-egosi na okwu dị adị mgbe onye na-ekiri. N'ọtụtụ isiokwu m kọwapụtara na anyị "adịla ndụ". Ị na-eme mmalite dị mma ma ọ bụrụ na ị isiokwu a gụchaa nke ọma, lee anya n'okpuru ihe omume 'simulation' ma ọ bụ tinye okwu a 'nkedo' na nchọta ọchụchọ. Ana m ahapụ okwu a n'ebe a ma mechie echiche ahụ n'echiche bụ na anyị "na-ebi ndụ na nmegharị". M na-ama ụma tinye nke ahụ n'amaokwu, n'ihi na ịnweghị ike ibi ndụ, ma enwere ike inwe nkwenye zuru oke na ị bi na ya, ma n'eziokwu ịghọta ma kpọọ egwu (site n'èzí).
Ọ bụrụ na anyị na-egwu egwu, mgbe ahụ, a ghaghị inwe 'njikọ mkpụrụ obi' na ihe mbụ, dịka njikọ Neuralink na 5G wireless, dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta igwe ojii nke Google ma ọ bụrụ na ị ga-ekere òkè na nkogharị na 2045 nke dị na ya yiri. Na 'nkpuru obi' bu ya bu njikọ netiti 'onye mbu'. Egwuregwu gị dị na nrugharị ahụ bụ 'sitere n'ike mmụọ nsọ' ma na-achịkwa ya n'èzí. Na isiokwu a M na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe mmụọ si n'ike mmụọ nsọ na otú ọ bụghị nanị na ndị na-adịghị egwu egwu (NPCs) gbara gị gburugburu, kamakwa ndị avatars nke onye na-arụ ọrụ (ma ọ bụ "onye na-arụ ọrụ" na-achịkwa). Ịgụ isiokwu ahụ ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma "mkpụrụ obi" ma ọ bụ "ịmara."
Ọgba aghara Luciferian nke abụọ
Ọ ga-amasị m ịkọwara onye na-agụ ya okwu mmalite nke Richard Thieme site na ngosi dị n'okpuru ebe a. Echere m, okwu ndị a bụ ihe doro anya na-egosi na ọ bụ 'onye na-arụ ọrụ' na-eduzi avatar (Richard Thieme). Dịka ọmụmaatụ, na 20 sekọnd oge ikpeazụ ọ na-ekwu okwu dịka "ụmụaka na-ekwu okwu na-adịghị mma" n'ihi na ọ maara na ndị a bụ ndị avatars na ọzụzụ; ndị ọgbọ ụgbọ mmiri ndị Luciferian na-achụ (site na mpụga a). Ụmụ na-ekwu okwu na-adịghị mma ugbu a nwere ọnọdụ dị mkpa na ụdị 'ezi na ihe ọjọọ' niile. Ka okwu ndị a banye n'ime gị nke ọma, n'ihi na ọ na-akọwa ebe a na sekọnd ole na ole na nkoghari a dabeere n'ụdị dị iche iche site na ihe ọma na ihe ọjọọ (abụọ, ndị mmadụ, ndị na-eme ihe / nri, Ndị Kraịst / Muslim, ndị mmemme / ndị omempụ na ihe niile inye ọdịdị na ịnọgide na-enwe ọhụụ). O kwukwara na ọ hụrụ na "ụmụaka a na-ekwu okwu na-adịghị mma" ga-aghọ "ndị ndú echiche" nke narị afọ a; nakwa na ha aghọwo nke ahụ.
Site na 28e nke abụọ, ọ na-aga n'ihu site na ịkọwa na 'avatars' (dịka m na-akpọ ha) na-etinye ọnọdụ dị mkpa ma kee ohere, nke ọ na - akpọ 'ihe gbasara IT ma ọ bụ nchebe ma ọ bụ nchebe ohere anyị niile bi". N'okwu ndị ahụ, ọ na-agwa ndị na-ege ya ntị ihe ha doro anya na ha maara (n'ihi na ha bụ ndị Lucifer nke egwuregwu avatar), mana ihe dị mụ na gị mkpa ịbịakwute anyị. Ị bi ihe gbasara IT nke duality (nchekwa na nchebe). Ị na-ebi na nmegharị.
Onye na-ege ntị na-ege ntị ka nwere ike ịzaghachi: "Ọ dịghị agha, ọ na-ekwu okwu na ndị na-agba ọsọ na ndị ọgba ọsọ na nke ahụ bụ maka nchebe na enweghị nchebe na mpaghara nke kọmputa na ịntanetị ma ọ bụ netwọk ụlọ ọrụ na otú ahụ". Otú ọ dị, ọ bụrụ na ikwe ka nkwupụta niile banye n'ime gị, ị ga-ahụ ebe Thieme echt ekwu banyere ya. Naanị gee ntị na 40e nke abụọ nke ọ na-ekwughachi okwu ndị nchụàjà ya: "Ekepụtara ikpo okwu nke anyị bi ". Ihe niile na-esote na-emetụ ọkụ na Thieme na-emeghe ma na-anya isi banyere ụzọ a na-ejikọta ọnụ ọgụgụ ahụ ma na-ejide onwe ya.
Mbido niile na 3e nkeji na-agba ọsọ na mkpughe, gụnyere na 2: 45e nkeji, nke o kwuru: "Ihe ngosi a na-anwa ime ka eziokwu ahụ bụ na ụmụ mmadụ na-emeghe usoro ihe ọmụma na ike". Oge eruola maka mụ na gị ka m hụ ihe dị ka ha dị. Sayensị gbasara usoro ihe omumu dum dika usoro ihe omuma. Ọ bụ usoro ihe ọmụma. Ọ bụ usoro ihe omume. Ọ bụ usoro AI. Iji dokwuo anya, nkedo. Okporo ụzọ n'okporo ụzọ nke anyị nọ ugbu a bụ otu ebe onye na-emepụta simụ a na-arụ ọrụ n'ịmepụta simulation ọhụrụ: ngwegharị-na-simulation, dị ka akọwapụtara na isiokwu a.
Kedu ihe mere anyị ji na-aga n'okporo ụzọ iji kwalite ihe nkedo-na-simulation? Otu njikwa - ndị ọhụụ ndị ụlọ Luciferian na-achịkwa (site n'èzí) - choro ka gị na m gbanye anyị bio-avatars (ahụ mmadụ anyị) iji transhumanism jikọrọ ya na AI. N'okwu ahụ, ọ dị mkpa ịghọta onye ị bụ na maka ihe ị ga-ahụ site na njirimara nke ihe ọ bụla (adị adị). Na isiokwu a ìhè m na - eme ihe 'mkpụrụ ndụ mpi' nke ịdị adị anyị. Ozugbo ị gụrụ ya, ị nwere ike chọpụtala na mkpụrụ ndụ nke ịdị adị - nchịkọta nke ihe ọmụma niile - emeela ka ọdịdị nke otu ụdị mmadụ dị iche iche dị (dịka sel nke na-emepụta mkpụrụ ndụ nke onye nke ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọ bụla n'ime ya) . Onye ọ bụla n'otu n'otu nwere ụdị onwe ya pụrụ iche ma nwee ọrụ nke ya. N'ime ahụ, otu sel na-etolite na anya ma nke ọzọ ịzụlite n'obi, na ihe ndị ọzọ. Ụdị ọdịdị gị (nke na-ahụ / na-egwu ntụrụndụ ndị a) bụ ya bụ ụdị mbụ nke ịmara; njirimara gị. Nke a bụ ụdị dị iche iche nke ọdịdị gị.
Ntughari nke anyi huru ugbu a kacha mma ka a mata dika nje. N'uche m, anyị bụ onye akaebe (onye na-ekiri ihe / onye na-egwu egwu) na nkwekọrịta nje virus dị iche iche. Kpọmkwem (gụọ na ihe omuma nile na ihe omuma) anyi na ekwu maka nkwekorita Lucifer. Ngosipụta nke nje bụ na ọ na-anwa ịwakpo ya ma buru ozu ahụ. N'uche nke m, nke ahụ bụkwa atụmatụ nke onye wuru simulation nje a. A na-ewukwasị usoro nje ahụ gburugburu 'sistem nke ihe ọ bụla bụ'; ịbanye n'ime ya, ibute ọnyá ma weghachite isi iyi-isi-koodu-nke-ihe niile-ihe (nke a na-akpọkwa "ogige quantum"). Nke a ga - ekwe omume ọ bụrụ na ọ na - emetụta mkpụrụ ndụ ndị ọzọ. Usoro AI nke anyi bi n'ime ya (perceive / play) choro ka anyi mee ka anyi di iche iche nke oma (nke bu otu ihe di iche iche nke bu ihe di iche iche) nke nwere usoro nje.
Otú ọ dị, anyị makwaara site na usoro ndu (site na avatar mmadụ anyị) na nje dị n'ebe ahụ iji nyochaa usoro ahụ nakwa na a pụrụ imeri virus. Ọ bụ ezie na n'oge ịgba ọgwụ mgbochi ugbu a, anyị na-eche na ahụ mmadụ anwụọla ọrụ ngwọta onwe ya, nke a bụ ihe efu (na okwu nduhie). Ụdị njirimara anyị (mmalite nke mbụ anyị) nwere ike ịlụso nje ahụ ọgụ ma merie usoro nje ahụ. Anyị kwesịrị icheta onye anyị bụ. Cheta na ị bụghị ahụ gị, ọ bụghịkwa echiche gị. Echiche gị bụ usoro AI nke a zụrụ azụ na netwọk na-arụ ọrụ nke gị na-arụ ọrụ bio-central (ụbụrụ gị) nke na-agba n'ime ọnụ ụlọ dị n'elu nke avatar gị; onye ị na-ahụ na ihuenyo nke mmempụ a na onye ị na-achọ ịmata onwe gị. A na-emebisị usoro nje ahụ mgbe anyị chetara ụdị ihe dị iche iche nke okike: ihe omuma nke mbụ anyị si na sistem nke ihe niile dị.
Gee ntị na nkọwa Elon Musk banyere ọdịnihu dị nso bụ nke anyị ga-etinye uche na ntanye
Pope Francis pionored ụwa ọhụrụ okpukpe
Tags: 2.0, ụbụrụ, con, Def, kọwaa, nhazi, agba, mkpụrụ, hack, hacked, mmadụ, interface, Ndị nwoke, eziokwu, Richard, nyocha, ịme anwansị, Thieme
22 July 2019 na 14: 54
Ana m eji nyocha nke ugbu a na-eme ihe dị njọ, dịka Ouroboros, oke egwu nke na mmadụ ole na ole amaghị otú e si agbaji ...
22 July 2019 na 14: 55
Onye na-ekiri ya bụ ihe a hụrụ
22 July 2019 na 16: 38
..N'oge nke nkwenye anabatagoro, lee okwu a
Oge nkeji 2 gara aga
Oge nna (Kronos.Saturn), onye na-ekiri ihe a na-ahụ anya .. anyị na-ebi n’ime anwale ka a na-eji ike abụọ na-emegide agha iji gosipụta ihe ga-esi na ya pụta.
22 July 2019 na 17: 19
Ederede dual (edemede a na-arụ ọrụ dịka ụkpụrụ nke duality) si '' elitist avatars '(avata ndị ahụ ndị otu ahụ na-ewu ụlọ Luciferi na-achịkwa).
Cheta: ịme anwansị na-abụkarị simulation ma ọ bụrụ na ndị egwuregwu nwere ikike ịhọrọ. Ma ọ bụghị ya, a ga-edozikwa nsonaazụ ya tupu oge ahụ, ọ gaghịzị abụ ịme anwansị, mana ihe nkiri.
Avatars ndị na-anwa iduzi edemede ahụ ga-enwerịrị ịmegharị ndị egwuregwu na-agagharị site na otu. Oge a na-eduga ha na otu ụzọ (dịka mgbakwunye na obere mkpanaka batrị na-ebute ugbua).
Ọ bụ ya mere anyị ji nwee ike ịghọta ịdị n'otu ebe niile.
22 July 2019 na 18: 02
“A na-ahụ Ihe Ndị Na-ahụ”
"Nzoputa bu Enyemaka" !!
23 July 2019 na 22: 17
22 July 2019 na 17: 27
Akụkọ niile mara mma, mana ọ dị nfe ma dịkwa mgbagwoju anya n'ụzọ ime mmụọ iji mee nke ahụ dị mfe, ntakịrị ihe karịa.
Ọ dị nnọọ mfe ma dịkwa mfe nke m chịkọtara n’elu ederede 1. Nke a na-echekwa nkuzi na nkuzi ime mmụọ dị oke ọnụ.
Anyị bụ ndị lere anya n’egwuregwu nje egwuregwu Luciferian nke ọtụtụ egwuregwu. Cheta onwe gi nke mbu, o jula egwuregwu. Ọ bụ ya!
Yabụ na agbadaghị agbada ma ọ bụ furu efu, ọnyà esighị gị, ịnọghị ebe a (ma ọ ga-alaghachi azụ) .. havekwesighi 'gbanahụ na matriks a'. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu Playstatipn, ihe mbụ gị nwere bụ n'otu oge n'ihe ndina ya na njikwa n'aka. Still ka nọ ma bụrụkwa gị mgbe ochie.
Anyi kpebiri na nje a enweghị ike ịbanye n'ime ya ma ọ bụ bute ya. Anyị ekpebiela nke a n'ihi na anyị na-ahụ ya.
22 July 2019 na 17: 34
Emere uzo oma nke ututu Ouroboros:
22 July 2019 na 17: 40
Usionrụ ọhụụ nke ajọ ịlọ ụwa adịwo mfe iji wuo ndị na-ewu ụlọ Luciferian ka ha rụọ ụlọ ịme anwansị. Hụkwa ihe ndị dị n’okpuru isiokwu ahụ.
Spiritualwa nke ime mmụọ dị ebe a na ndị ebe a na-anọchi anya anyị pụọ n'eziokwu ahụ ma mee ka anyị kwenye na anyị nọ n'ezie. Ọ bụrụ n’ịhụta na anyị ghọtara ngbanye mmụọ (ọbụlagodi na ọ bụ ịme anwansị), anyị ga-achọpụta na anyị enweghị ike ịbanye na ya, kama anyị ga-ahụ ya. Onye na-ekiri ya ka nọ ebe a na-achịkwa ya.
Ọ bụ aka na ụbụrụ avatar chọpụtara nke ahụ.
22 July 2019 na 18: 18
Anyị maara nke ahụ ugbu a. Echere m na maka gị-na-agụ akwụkwọ mbụ, ihe nkiri youtube nke Chiron Ikpeazụ nwere ike ịbụ onye na-emeghe anya.
Dịka onye mbido, ọ ga - enyere gị aka ibido ịmalite ịgụnye ihe ndị a niile Ọ na - akọwapụta nke ọma na ime mmụọ abụghị ihe ị ga - esonye n'ihi na ị na-echekwa ịme anwansị ahụ (nguzogide bụ enyemaka).
Ekwesịrị m icheta nke ahụ ogologo oge afọ ole na ole gara aga (mgbe mbụ m lere usoro Golden Web site n'aka ya)… M nwekwara ile ha oge 15.
Ugbu a nke a bụ n'ọchịchịrị (maka anyị) mana maka onye na - achọ inyocha ihe a ga - aba ezigbo uru ..
22 July 2019 na 19: 25
O were ihe karịrị otu awa iji jiri nlezianya gụọ nke a.
Mgbe lenses wepụsịrị okpu m na-enweghị.
Ọtụtụ mgbe enwere m mmetụta na mụ onwe anyị dere edemede mbụ a maka / n'ụwa - belụsọ na nke a bụ oyiri ebe a - yana na ihe weghaara ma ọ bụ 'na-edegharị' nke a n'ụzọ anyị si nweta ya. enwetabeghị ma ọ bụ site na ọnọdụ a enweghị ike ịhụ otú ọ dị edm edm.
Ihe m na eme n’iru bu ime ka m mata ihe gbasara m. O buru na m bu n’obi - n’echeputa ihe n’echiche nke m - adighm etinyekwu ego - n’enweghi nke mbu ya.
22 July 2019 na 22: 12
I putara na anyi dere usoro nje virus nke Luciferian n’onwe ya n’echiche nke ụdị ịma aka?
Amaghị m ma m ghọtara gị nke ọma.
Can nwere ike ịkọwa ọzọ ihe ị pụtara?
23 July 2019 na 00: 50
@Hans, Thieme akọwaworị ya site na iji asụsụ ya bụ luciferian na ngosipụta ya site na iji mpempe Möbius dịka akụkọ.
Ihe dị adị na mbara igwe mobius nke dị warara ga-apụ iche site na enyo nke ya - nke a na-eme mkpọtụ a na-eme ka nnukwu mpekere gafee n'etiti aka ekpe gaa n'aka nri ya na mgbasa ọ bụla. Obu ihe anagagh adi n’igwe na uwa nwere ike nwe ihe a, lee
23 July 2019 na 00: 56
23 July 2019 na 06: 11
Ibi n’ụwa ma ọ bụ n’ụwa karịa ma ọ bụ n’adịghị ka nke a anyị edepụtara onwe anyị. Ihe omume luciferian bu nke ‘ewebata’ n’ebe ahu dika oria a nke i kowara n’elu ya, tinyere abuo wdg… Edeghi ya n’onwe anyi - ka ‘gbaa anyi ume. Nke a na-esite na ụzọ dị iche na ebumnuche nke aka ya. Mbido ya enweghị ikike ịchịkwa ya na ọ bara uru na wdg ... - Naanị? - site na simulation a - na simulation - enwere ike ịhụ ya. Nje virus weghaara ihe anyi n’echebe ya
23 July 2019 na 09: 24
Ibi n’ụwa ma ọ bụ n’ụwa karịa ma ọ bụ n’adịghị ka nke a anyị edepụtara onwe anyị. Ihe omume luciferian bu nke ‘ewebata’ n’ebe ahu dika oria a nke i kowara n’elu ya, tinyere abuo wdg. Nke a na-esite na ụzọ dị iche na ebumnuche nke aka ya. Mbido ya enweghị ikike ịchịkwa ya na ọ bara uru na wdg ... - Naanị? - site na simulation a - na simulation - enwere ike ịhụ ya. Nje virus weghaara ihe okike anyi ma jiri ya nweta ahuhu na omuma a site n’aka anyi. Edebeghi usoro nje virus a iji 'mee ka anyị dị ike, ọ bụ n'ọnọdụ kachasị mma n'ihi ya. Edere ụwa site n'aka anyị, iji mee ihe ọchị ma ju anyị anya. Onweghi nguzogide, ihe kwesiri ntukwasi obi kwesiri ichota nke a. Edebere echiche a n’ime ya.
23 July 2019 na 10: 26
Nke ahụ bụkwa nhọrọ. O kwere omume na Lucifa emeputala ihe anyi wuburu.
N'agbanyeghị etu ị tụgharịrị ma ọ bụ tụgharịa, ọ bụ Luciferian n'okike ma n'agbanyeghị etu ị si atụgharị ma ọ bụ gbanwee ya, anyị agaghị edozi ya "n'ogo Sims".
23 July 2019 na 10: 45
Achọpụtara m n’okwu gị na ị ka chọrọ ịrapara n'echiche nke "ndụ n'ụwa". Anyị ebighi n’ụwa. Havechọtala onwe gị na ngosipụta "na-adọrọ adọrọ".
Ọ bụ mmemme AI ụbụrụ gị (nke a na-akpọkwa 'ego') chọrọ ịrapara n'echiche ahụ.
Hapụ ya: ị na-ekere òkè na ịme anwansị ọtụtụ ọkpụkpọ dị ka onye na - ahụ ihe anya. Gaghị ebi n’ụwa. Andwa na ụwa adịghị. Ọ bụ ịme anwansị!
23 July 2019 na 12: 23
Ọ dị mma, isiokwu dị mma. O bu ihe nwute na amukwasighi ihe omuma a nye 'ala.' 'Swa' dị ka akụrụngwa, ndị ọrụ, ngwaọrụ nke ndị kwabatara 'n'ọgụ' n'usoro a. Ọ bụrụ na anyị ga - eme ka onye kwenye kwabatara na 'Elite' kwalite onwe ha Saturn. Mana ọ dị nwute na ha anaghị eme nke a afọ ofufo nyere ntụsara ahụ na uru ha nwere site na ọnọdụ ha dị mkpa na simulation ụwa a.
" Elon Musk nwere mmekọrịta na nwoke transgender? Mụọ egwú ndị a na-akpọ Grimes ebe a
Pedophile Jeffrey Epstein nyocha nke neuroscientific na-abanye na netwọọk AI kachasị mkpa n'ụwa »
Nleta nile: 14.562.437
XanderN op Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!